Ukuhombisa iingobozi ze-wicker ngezinto ezisetyenzisiweyo | Uhlaziyo oluhlaziyiweyo
Ukuhombisa iingobozi ze-wicker
Akukho nto ithuthuzelayo kunokuthatha into esingasayisebenzisiyo kwaye siyiguqule ibe yinto entsha esebenzayo okanye yokuhlobisa. Kule meko siza kufunda uhombise iingobozi ze-wicker ngezinto ezihlaziyiweyo, iingobozi esinokuba nazo ekhaya yaye ekuphela kwento eziyenzayo kukuqokelela uthuli. Namhlanje siza kufunda iindlela ezahlukeneyo zokuzihombisa ukuze zitshintshe inkangeleko yazo kwaye sizinike izinto ezintsha ekhaya.
Kule nqaku siza kukuxelela indlela yokuhlobisa iibhasikiti ze-wicker kwaye zeziphi iidizayini ezidumileyo.
1 Ukuhombisa iingobozi ze-wicker
1.1 Ukuhombisa iibhasikithi ze-wicker kunye nezinto
2.2 imbiza yokutyala
Njengoko sele sikhankanyile, kwiimeko ezininzi sineebhasikithi ze-wicker kwaye sifuna ukubanika injongo eyahlukileyo kunokugcina uthuli, ingxaki kukuba ayihambelani ngokupheleleyo nomhlobiso wendlu yethu okanye asazi nje ukuba njani. ukuzihombisa. Siza kubonisa ezinye ngomsonto, umsonto, ipeyinti, amatye, amaqokobhe, iipom pom nokunye.
Sinokutshintsha inkangeleko yeebhasikithi zethu ze-wicker ukwenza izinto ezizodwa kunye nezikhethekileyo ngaphandle kokutyala imali eninzi. Ukuba besingasebenzisa amalaphu oboya aphuma ekhaya, ukumila kwawo kulula kuya kuyitshintsha kakhulu inkangeleko yawo. Kule meko, sikhethe ukuyenza sisebenzisa ubuchule bokukrola usebenzisa intambo yomqhaphu waseYiputa. Umhombiso omhle, olandela ipateni ephindaphindiweyo eyenza imizobo kwimeko yeli qokobhe, nangona unezicwangciso ezininzi ezahlukeneyo zokwenza. Ukugqibezela uyilo, sinokubandakanya ezinye zemigca efanayo, ubude buyinto esiyithandayo.
Enye inketho yokuhlobisa ibhasikidi ngoboya kukwenza ukuprintwa okuhlukileyo, kulo mzekelo weentyatyambo, kwaye njengoko zihlala ziphela ngomda omhle we-crochet esiya kuwuthunga phezulu kwebhasikidi. Iibhaskithi ezisetyenziswe ngoomakhulu bethu, ezo bhaskithi zangaphambili, ezizele yimbali kunye nomtsalane, ngoku zingaphinda zisetyenziswe njengeebhasikithi zokugcina okanye nje njengeqhekeza elihle lokuhlobisa.
Ukupenda kuyisisombululo esilula kakhulu kwaye esingabizi ukutshintsha ukubonakala kwayo. Peyinta ingobozi ngemibala enefashoni efana nepinki ephaphathekileyo kunye ne-mint eluhlaza, okanye uye kumbala omangalisayo njengomnyama ukuze utshintshe ngokwenene. Isikhwama esilula se-wicker sifakwe ngamalaphu esiwathandayo. Ngoncedo lwentambo eyenziwe ngewax kunye namaqokobhe amahle othe wawabamba kumda wendlu yakho, sinokwenza uyilo olunjalo noluhle. Ukuba ubeka amaqhekeza kwiindawo eziphakamileyo ezahlukeneyo, khetha eyona nxalenye inomtsalane ekupheleni komtya ngamnye. Iqokobhe elihonjiswe ngepeyinti linika umoya wobuntu ngakumbi, lizisa ezinye izinto.
Ukuhombisa iibhasikithi ze-wicker kunye nezinto
Ukuba ufuna ukunika i-rustic kunye ne-homey ukujonga kwigumbi lakho lokuhlala, ukuyijika ibe yindawo yokuphumla kunye nokuphumla, iibhasikidi ze-wicker ezihlotshisiwe zisona sixhobo esihle kakhulu. Ukusebenzisa i-scraps yelaphu kulula, inxalenye enzima kukufumana amalaphu ahambelana ngokugqibeleleyo kunye nawo wonke umhlobiso. Iincwadi zeScrapbooks ezinemigca engwevu emihle, eethe-ethe ethambileyo ziqinisekileyo ukuba ziya kubethwa.
Iibhasikithi ze-Wicker kunye neentyatyambo zibonakala ziyimpumelelo kakhulu, kwaye mhlawumbi zikho. Alukho uvandlakanyo olungcono kunokukhangela imizekelo ebonakalayo. Ukuhombisa ibhasikidi ye-wicker kwaye unokufumana ifom evuyayo kunye neentyatyambo kwindlu yonke.
Kwimihlobiso emininzi, iintyatyambo zenziwe nge-aluminium ukuze zihlale ixesha elide kuneentyatyambo zendalo. Ukubenza sinokusebenzisa iitoti zesiselo, kwaye endaweni yokubeka kwiibhotile, sibanika ubomi besibini obuhombisa ngakumbi. Iintyatyambo zendwangu, iintyatyambo zesilika okanye iintyatyambo zephepha Ziyakwazi nokuba yindlela enhle yokuhombisa ibhasikidi ye-wicker, usebenzisa i-t-shirts endala okanye amaqabunga alahliwe singenza iintyatyambo zobukhulu obuhlukeneyo, imibala kunye neemilo, uze uzinamathele kwibhaskithi kunye nompu weglue okanye ibhasikidi.
Iipom pom zihlala zisetyenziselwa ukuhombisa ukongeza umbala. Ukuhlobisa ibhasikidi okanye ibhasikidi ngeepom pom kuya kuba yindlela eyonwabileyo yokutshintsha imbonakalo yeebhasikiti esizisebenzisayo kwiibhobho okanye iimagazini zeemagazini. Iibhaskithi zigcina amathoyizi anemibala eqaqambileyo neyonwabisayo ngaphandle kokusebenzisa ipeyinti. Xa udinwa yimibala, kufuneka nje ufumane isiqwenga soboya ukuba ushiye ngaphezulu ukutshintsha umhombiso webhaskithi yakho.
Inquma idla ngokuba yinto esiyisebenzisela ukuhombisa izibambo okanye iidrowa. Ngoku, banokusinceda sitshintshe inkangeleko yayo nayiphi na ibhaskithi okanye ibhaskithi. Uyilo olunje ngemicu yefringe okanye imiphetho nganye, nokuba yintoni na ofuna ukuyiveza. Njengoko sibonile kwimizekelo yomibini, i-fringe ihlobisa kwaye yongeza ubomi kunye nombala. I-carrycot, kungakhathaliseki ukuba imilo okanye ubukhulu bayo, iya kuhlala iyamkela umhlobiso ngendlela yeefringe. Ibhaskithi eyonwabisayo nenemibala, okanye umbala omnye ococekileyo, nokuba ufika kwii-shades ezahlukeneyo, okanye ukuba sisebenzisa umbala omhlophe, i-hippie ngakumbi.
Kuyo yonke indlu, kungekudala okanye kamva, uya kufuna ibhokisi, isutikheyisi okanye umququzeleli omkhulu, ukongeza kumhombiso, osebenza ukugcina izinto kunye nokulungelelanisa indawo yethu: ikhitshi, igumbi lokuhlala, igumbi lokutyela, i-facade, igumbi lokulala, igumbi lokuhlambela ... Iitoni zayo ezingathathi hlangothi zenza kube lula ukudibanisa kunye nazo zonke iintlobo zefenitshala, kwaye ibe yimveliso yendalo, ihlala inika umnxeba wangempela kunye nokwenyani.
Ukusetyenziswa okukhulu kweengobozi ezincinci kunye neziphakathi kukugcinwa kwazo zonke iintlobo zezinto: izixhobo zasekhitshini kunye nezitya, izixhobo zokuhlambela, iitawuli, ukutya, izixhobo zeofisi, iisefu, iibhotile, iimagazini kunye neencwadi, imathiriyeli yokuthunga… iibhokisi ze wicker, ingakumbi ezomeleleyo, zezinye zezona ziluncedo zokuhombisa ezikhoyo. Ukuba zintle kakhulu nazo, kunzima ukuzixhathisa.
Iibhasikithi zeWicker yindlela efanelekileyo yokucwangcisa nokubonisa izityalo kunye neentyatyambo, nokuba zintsha okanye zomisiwe. Ukongeza kwiibhokisi ze-wicker ezincinci kunye neziphakathi, i-wicker elukiweyo ngendlela yeebhasikithi yongezwa, igqibelele ukubonisa iintyatyambo kwi-terrace yakho okanye kwigadi yakho.
Kwi-coat rack eholweni, ingasetyenziselwa ukuthenga, ukuba kukho ibhasikidi ingasetyenziselwa njengendawo yokugcina i-handkerchiefs okanye i-scarves, okanye njengento yokuhlobisa ukuhlobisa umnyango.
Yongeza enye kwiholo kwaye ufake amanye amasebe e-eucalyptus, kwaye kukho umboniso wemagazini onuka kamnandi nje xa uvula ucango.
Ndiyathemba ukuba ngolu lwazi unokufunda ngakumbi malunga nendlela yokuhlobisa iibhasikidi ze-wicker.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukuhlaziywa okuluhlaza » Ukonga umbane » Ikhaya eliGreen » Ukuhombisa iingobozi ze-wicker
Iiphaneli zelanga: Yonke into ekhoyo malunga nayo